Qarax ciidamada dowladda lagula eegtay agagaarka Isgoyska Banaadir – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qarax ciidamada dowladda lagula eegtay agagaarka Isgoyska Banaadir
A warsame 9 September 2014 10 September 2014
Mareeg.com: Qarax lala doonayey gaari ay wateen ciidamada Soomaaliya ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Isgooyska Banaadir iyo Isbitaal Madiina ee magaalada Muqdisho.
Waxaa qaraxa la sheegay in uu ahaa miinada rimuudka lagu hago, taasi oo lala damacsanaa in lagu qarxiyo gaarigaasi Cabdi Bilaha ah ee ciidamada dowladda Soomaaliya ay wateen.
Goobjooge ayaa warbaahinta u sheegay in aysan jirin wax khasaaro ah oo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka shacabkaa intaba soo gaaray.
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa baaritaano ka wada Wadada isku Xirta Isbitaalka Madiina iyo Isgooyska Banaadir, gaar ahaan agagaarka boosteejada laga raaco gaadiidka xaafada Jiiro Msikiin ee deegaanka Madiino aada.
Wadada isku xirta Isgoyska Banaadir iyo Isbitaalka Madiin ayaan ka mid ah jidadka aan dib u dhiska lagu sameynin, waxaana boosteejadaas agagaarikeeda ku yaallo goobo qashin qub ah.
Qaramada Midoobay oo cambaareysay qaraxyadii lagu hoobtay ee wadada Afgooye
Taliyaha booliska Soomaaliya: Dilalku wey ku yaraadeen Muqdisho